မုႈကနီၚနီႈမၚရံလ႕၀့ႈလူဒ႕ဥ, ဖ့ႀဘဴးအါရံၚ ၁၁ သီ Our Lady of Lourdes | Radio Veritas Asia
Grotto in Nyaunglebin, Myanmar and some of the devotees
မုႈကနီၚနီႈမၚရံလ႕၀့ႈလူဒ႕ဥ, Our Lady of Lourdes
ဖ့ႀဘဴးအါရံၚ ၁၁ သီ
ကိးနံဥဒဲး ဖဲလါဖ့ႀဘဴးအါရံၚ ၁၁ သီအမုႈနံၚယ တႈအိဥဖွိဥကရ႕မၚလၚကပီၚ၀ဲ နီႈမၚရံလ႕၀့လူဒ႕ဥ (Our Lady of Lourdes)ယ ဒ္အမ့ႈတႈအိဥသ့ဥနီဥထီဥက့ၚ မုႈကနီၚနီႈမၚရံအတႈလိဏဖ်ါထီဥအသး ၁၈ ဘ်ီ ဆူဖိသဥပိဏမုဏဖိ လ႕အသးအိဥ၀ဲ ၁၄ နံဥယ အမံၚမ့ႈ၀ဲ St. Bernadette Soubirousယ လ႕အမ့ႈ၀ဲ ပွၚထူစံဥမၚခူးဖိသ့ဥတဖဥအဖိမုဏတဂၚ အအိဥနဥ့လီၚ’
နီႈမၚရံလိဏဖ်ါထီဥအသး စးထီဥ၀ဲဖဲ ၁၈၅၈ လါဖ့ႀဘဴးအါရံၚ ၁၁ သီအမုႈနံၚယ ဒီးကတ႕ႈ၀ဲဖဲ လါဎူလံဥ ၁၆ သီ ဖဲတနံဥဃီအပူၚယ ဒီးတႈဃိထံသ့ဥညါတႈ လြံဥနံဥ၀ံၚအလီႈခံ ပွၚဒိးနဥ့ဘဥ၀ဲ သီခါကရ႕ခိဥ အတႈပဏဂ႕ႈပဏက်႕ၚတႈဂ့ႈအံၚနဥ့လီၚ’
တႈအိဥဖွိဥကရ႕အတႈသိဥလိနဲဥလိ ဒုးဟူထီဥသါလီၚတႈ ဘဥဃးဒီး နီႈမၚရံဘဥတႈဒ႕ထီဥအီၚ ပူၚဖ်ဲးဒီးတႈဒဲးဘးအဃံဥအမူး ဖဲ ၁၈၅၄ အနံဥ၀ံၚအလီႈခံယ နီႈမၚရံလိဏဖ်ါထီဥအသး လ႕၀့ႈလူဒ႕ဥ ဒုးကဲထီဥ၀ဲ၀့ႈအံၚ ဒ္အမ့ႈတႈလီႈလ႕ ပွၚအါဒံအါဂၚသ့ဥတဖဥ လဲၚတုၚ၀ဲတႈလီႈနဥ့လီၚ’ ခီဖ်ိလ႕အ၀ဲသ့ဥအတႈလဲၚဘူဥဘါတႈယ အတႈထုကဖဥတႈယ ဒီးမ့ႈလ႕အလဲၚလုႈဘဥ၀ဲထံ ဒ္အဎြၚလီၚ၀ဲဖဲ တႈလီႈလ႕နီႈမၚရံဒုးနဲဥ၀ဲနီႈ Bernadette အဃိယ ပွၚကထိဒီးအကထိသ့ဥတဖဥစံး၀ဲလ႕ အဒိးနဥ့ဘဥက့ၚ၀ဲ တႈဎါဘ်ါက့ၚအ၀ဲသ့ဥ ဒီးဒိးနဥ့ဘဥက့ၚ၀ဲ နီႈခိအတႈအိဥဆူဥအိဥခ့် တကူဥသ့ဥနဥ့လီၚ’ ပွၚကူဥသ့ကူဥဘဥသ့ဥတဖဥ ပဏဂ႕ႈပဏက်႕ၚ၀ဲတႈဂ့ႈ ၆၉ ခါယ ဒ္အမ့ႈတႈဂ့ႈလ႕အဘဥဃးဒီး ပွၚဘ်ါက့ၚ၀ဲလ႕တႈဆူးတႈဆါ လ႕တႈလီၚလိဏလီၚလးအပူၚ စးထီဥဖဲ ၁၈၆၂ အနံဥလံၚလံၚနဥ့လီၚ’
နီႈ Bernadette လ႕မုႈတနံၚ ကဒိးနဥ့ဘဥ၀ဲတႈထံဥလီၚလီၚဆီဆီ လ႕နီႈမၚရံအအိဥယ အိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲဖဲ ၁၈၄၄ လါဎႏူၚအါရံၚအပူၚယ ဒီးမ့ႈ၀ဲပွၚထူစံဥမၚခုးဖိ Francois ဒီး Louise သ့ဥတဖဥအဖိမုႈယ ဒီးမ့ႈစ့ႈကီးဖိအဆိကတ႕ႈတဂၚ နဥ့လီၚ’ ဒူဥဖိထ႕ဖိအံၚအတႈအိဥမူ အိဥဖ်ါဃံလၚ၀ဲ ဘဥဆဥ အိဥ၀ဲဃုဏဒီးတႈကီတႈခဲသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’ နီႈ Bernadette အဒီပုႈ၀ဲႈအါဂၚသ့ဥတဖဥ သံ၀ဲဖဲအဖိသဥလံၚလံၚယ မ့မ့ႈလ႕ နီႈ Bernadette တခီ အိဥ၀ဲဒီးတႈဆါ ပွၚကိး၀ဲလ႕ကိၚလၚ၀ါအက်ိဏ (asthma)မ့ႈ၀ဲပွၚကသါထီဥကသါလီၚကီ၀ဲ ဒီးပွၚကူး၀ဲနဥ့လီၚ’ မုႈက်ိၚ၀ဲၚကြႈအတႈကီတႈခဲ ဒီးမ့ႈလ႕အပႈဘဥဒိဘဥထံး၀ဲအဃိ တသ့မၚလ႕ၚတႈဒီး အစဲးဖီကဟဥလ႕အအိဥဒီးအီၚဖဲ ၁၈၅၄ အနံဥနဥ့လီၚ’
တႈဖွီဥတႈဎဏအဆ႕ကတီႈနံဥလါသ့ဥတဖဥ ဟဲတုၚအိဥအ၀ဲသ့ဥအဃိယ နီႈ Bernadette ဘဥအိဥဎံၚ၀ဲဒီးအမိႈအပႈသ့ဥတဖဥယ တသ့မၚလိအသးလ႕ကေိဘဥဒီး ဘဥဖံးတႈမၚတႈနဥ့လီၚ’ ဖဲ ၁၈၅၈ လါဎႏူၚအါရံၚအပူၚ က့ၚကဒါက့ၚ၀ဲဆူ အဒူဥဖိထ႕ဖိသ့ဥတဖဥအအိဥယ ဖဲအ၀ဲသ့ဥ ဘဥအိဥဒဥ၀ဲလ႕ ဟံဥဖိဆံးဆံးဖိတဖ်႕ဥအပူၚနဥ့လီၚ’ မ့ႈလ႕အတႈစူဥတႈနဏဂ႕ႈက်႕ၚ၀ဲအဃိ နီႈ Bernadette လ႕အဆိအခါ တသ့မၚလိမၚဒိးအသးဘဥဆဥ က်ဲးစ႕ၚဃုသ့ဥညါနဥပ႕ႈအသး ဘဥဃးဒီးတႈအိဥဖွိဥကရ႕ အတႈသိဥလိနဲဥလိတႈသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’
ဖဲ ၁၈၅၈ လါဖ့ႀဘဴးအါရံၚ ၁၁ သီအမုႈနံၚယ နီႈ Bernadette ဃုဏဒီးအဒီပုႈ၀ဲႈမုႈ ဒီးအတံၚသကိးတဂၚ လဲၚ၀ဲဆူသ့ဥပွႈပူၚ ဒ္သိးအကမၚနဥ့၀ဲ သ့ဥမုႈဒ့အဂီႈနဥ့လီၚ’ ဒ္အလဲၚ၀ဲ ဘူးထီဥဒီးဘူးထီဥ၀ဲဆူလ႕ႈကအိ လ႕အအိဥဘူး၀ဲဒီးထံက်ိဖိတက်ိအခါယ ထံဥဘဥ၀ဲတႈကပီၚ ဟဲလီၚ၀ဲဆူအအိဥလ႕တပွီႈက်ါ တႈလီႈတခါအပူၚနဥ့လီၚ’ တႈကပီၚအံၚ အိဥ၀းတရံး၀ဲပိဏမုဥတဂၚ လ႕အကူ၀ဲသိး၀ဲတႈအ၀ါ ဒီးဖီဥဃဥ၀ဲဖဲစီဆွံနဥ့လီၚ’ ဒ္အထံဥ၀ဲပိဏမုဥလ႕ အအိဥဒီးတႈကူတႈသိးအ၀ါတဂၚအံၚအသိး နီႈ Bernadette စးထီဥမၚ၀ဲထူဥစုညါအတႈပနီႈယ ခ်ံးလီၚအခီဥယ ထုးထီဥ၀ဲအဖဲစီဆွံယ ဒီးစးထီဥ၀ဲ အတႈဘါထုကဖဥတႈနဥ့လီၚ’ ဖဲအထုကဖဥတႈ၀ံၚ၀ဲအခါယ ပိဏမုဥလ႕အအိဥဖ်ါ၀ဲလ႕အမဲဏညါတဂၚအံၚ စံးအီၚဒ္သိး အကသုးဘူးအသးဆူအအိဥနဥ့လီၚ’ ဘဥဆဥအ၀ဲအိဥဒဥ၀ဲလ႕အလီႈ တလဲၚ၀ဲဘဥနဥ့လီၚ’ ဒီးပိဏမုႈလ႕အထံဥ၀ဲတဂၚအံၚ လီၚမဥကြံဏ၀ဲနဥ့လီၚ’
ပွၚလ႕အလဲၚဃုဏတႈအီၚသ့ဥတဖဥ တထံဥ၀ဲတႈနီတမံၚဘဥနဥ့လီၚ’ Bernadette တဲဖ်ါထီဥ၀ဲပိဏမုဏလ႕အအိဥဒီး တႈကူတႈသိးအ၀ါအံၚအက့ႈအဂီၚ ဆူအတံၚသကိးသ့ဥတဖဥအအိဥယ ဒီးတဲအ၀ဲသ့ဥ ဒ္သိးအသုတဒုးသ့ဥညါပွၚနီတဂၚ အဂီႈနဥ့လီၚ’ ဘဥဆဥယ ပွၚသ့ဥညါ၀ဲတႈဂ့ႈအံၚ တနံၚဃီနဥ့လီၚ’ ဖဲမုႈဒဲးနံၚလ႕အဟဲတုၚ၀ဲတနံၚယ Bernadette လဲၚကဒီး၀ဲဆူ လ႕ႈကအိအိဥ၀ဲတႈလီႈယ ထံဥဘဥကဒီး၀ဲပိဏမုႈအံၚတဘ်ီနဥ့လီၚ’ ပိဏမုႈလ႕အလိဏဖ်ါထီဥအသးတဂၚအံၚ မ့ႈမတၚမတၚ ပွၚတသ့ဥညါဒ္၀ဲဘဥဒီး ဎံဏ၀ဲတဘ်ဳးႏြံနဥ့လီၚ’
ပွၚဒိဥတုဏခိဥပွဲၚတနီၚ လဲၚဃုဏတႈဒီးနီႈ Bernadette ဖဲအလဲၚ၀ဲဆူတႈလီႈအံၚ သ႕ဘ်ီတဘ်ီအကတီႈယ ဖဲ လါဖ့ႀဘဴၚအါရံၚ ၁၈ သီအမုႈနံၚ ဘဥဆဥ ဒ္နီႈ Bernadette ထံဥတႈအသိး အ၀ဲသ့ဥတထံဥဘဥ၀ဲဘဥနဥ့လီၚ’ ပိဏမုႈလ႕အအိဥဖ်ါ၀ဲဒီး တႈကူတႈသိးအ၀ါအံၚ မ႕၀ဲနီႈ Bernadette ဒ္သိးအကဟဲက့ၚ၀ဲဆူတႈလီၚအံၚ ဖဲခံႏြံအတီႈပူၚနဥ့လီၚ’ လ႕ခံနီႈ Bernadette ကြဲးဖ်ါထီဥ၀ဲလ႕ ပိဏမုႈအံၚ စံးဘဥဎၚလ႕ အတဒုးမၚနဥ့ဎၚ အတႈအ႕ဥလီၚအီလီၚလ႕ ဟီဥခိဥခ်႕ခဲကနံဥအံၚ အတႈသူဥဖွံသးညီဘဥဒီး ကမ့ႈ၀ဲလ႕ခံတဃဥနဥ့လီၚ’ အဒူဥဖိထ႕ဖိသ့ဥတဖဥ ဒီးပွၚအဂၚသ့ဥတဖဥ လဲၚတႈဒီးအီၚဆူလ႕ႈကအိအံၚအိဥ၀ဲတႈလီႈ လ႕ခံတနံၚယ ဘဥဆဥယ ထဲဒဥပိဏမုႈဖိသဥအံၚ ထံဥဘဥ၀ဲဒီးနႈဟူဘဥ၀ဲ ပိဏမုႈလ႕အလိဏဖ်ါထီဥအသးတဂၚအံၚ အတႈစံးတႈကတိၚသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’
ဖဲမုႈနံၚမုႈသီတနီၚလဲၚပူၚကြံဏ၀ံၚအလီႈခံယ ပွၚလ႕အလဲၚ၀ဲဆူ လ႕ႈကအိအိဥ၀ဲတႈလီႈအံၚ အနီႈဂံႈအါထီဥဒီးအါထီဥ၀ဲယ ဒီးမ့ႈ၀ဲအါနဥ့အဂၚ ၁၀၀ သ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’ သီခါလ႕အဘဥမူဘဥဒါ (Fr. Peyramale, Parish Priest) ဖဲတႈလီႈအံၚ အိဥထီဥ၀ဲဒီးတႈသူဥဟုးသး၀း ဃုဏဒီးပ႕ၚကီႈ (Police) သ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’ ဖဲလါဖ့ႀဘဴၚအါရံၚ ၂၄ သီအမုႈနံၚယ ပွၚအဂၚ ၂၅၀ သ့ဥတဖဥထံဥဘဥ၀ဲလ႕နီႈ Bernadette ဟီဥ၀ဲဎ႕ၚ၀ဲဒိဥဒိဥကလဲဥယ ဘဥဆဥ ပွၚလ႕အနႈဟူ၀ဲ ပိဏမုႈလ႕အလိဏဖ်ါထီဥအသးဆူအအိဥ အတႈဘိးဘဥသ့ဥညါတႈ မ့ႈဒဥထဲနီႈ Bernadette တဂၚဧိၚနဥ့လီၚ’ တႈဘိးဘဥသ့ဥညါတႈမ့ႈ၀ဲ တႈပွီႈဎဏလီၚက့ၚသးယ တႈပီႈဎဏလီၚက့ၚသးယ တႈပီႈဎဏလီၚက့ၚသး (လ႕အဲကလံးအက်ိဏ Penance! Penance! Penance!) ဒီးဒ္သိးပွၚကထုကဖဥတႈဆူဎြၚအအိဥ လ႕ပွၚတႈဒဲးဘးဖိသ့ဥတဖဥအဂီႈယ ကဘဥလဲၚဒီးန႕မူ၀ဲဟီဥခိဥ လ႕ပွၚတႈဒဲးဘးဖိသ့ဥတဖဥ အတႈလဲလိဏကြံဏအသးအဂီႈနဥ့လီၚ’
ဖဲလါဖ့ႀဘဴးအါရံၚ ၂၅ သီအမုႈနံၚ ပွၚဂီႈမုႈသ့ဥတဖဥအိဥ၀ဲဖဲ လ႕ႈကအိအိဥ၀ဲတႈလီႈယဘဥဆဥယ ထံဥဘဥ၀ဲနီႈ Bernadette အီ၀ဲထံလ႕အအိဥဒီးကပံႈ လ႕ထံက်ိဖိအပူၚယ ဒီးအီဥ၀ဲနီဥဧိၚမံၚဧိၚသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’ ပိဏမုႈလ႕အလိဏဖ်ါထီဥအသးဆူအအိဥ စံး၀ဲလ႕ အတႈအီ၀ဲထံဒီးအီဥ၀ဲနီဥအံၚ မ့ႈ၀ဲတႈလ႕အဘဥဃးဒီး တႈလိးက့ၚတႈဒဲးဘးအဂ့ႈနဥ့လီၚ’ ပွၚလ႕အကြႈဎုႈတႈလ႕တႈကပၚသ့ဥတဖဥ ထံဥဘဥ၀ဲပိဏမုႈဖိသဥအံၚ မၚတႈလ႕တႈလီၚတိဏလီၚဆီ၀ဲသ့ဥတဖဥအပူၚယ ဒီးတႈတမံၚလ႕ပွၚသ့ဥညါအီၚအါထီဥ၀ဲတမံၚအံၚ ကဲထီဥတႈဂ့ႈလ႕ တႈနံၚက၀ဲႈပ်ီဥကဒီယ တႈနဏနဥ့အီၚတသ့၀ဲအဂ့ႈနဥ့လီၚ’
ဖဲလါဖ့ႀဘဴးအါရံၚ ၂၇ သီအမုႈနံၚယ နီႈ Bernadette ထံဥနဥ့တႈလ႕အလီၚသူဥခုသးခု၀ဲတမံၚနဥ့လီၚ’ ထံမူလ႕အအီတ့ႈလံ၀ဲထံအပူၚ တမ့ႈလ႕ကပံႈထံလ႕ၚဘဥဒီး မ့ႈ၀ဲထံလ႕အကဆွဲကဆွီ၀ဲနဥ့လီၚ’ ဒ္ပွၚဂီႈမုႈသ့ဥတဖဥ ဟဲအိဥဖွိဥရိဖွိဥ၀ဲအသိးယ ပွၚပဏစ့ႈကီးပွၚသးလ႕ ထံမူအတႈလီႈ အိဥထီဥ၀ဲဒီးထံလ႕အဆွံ ကဆွဲကဆွီ၀ဲအဂ့ႈယ ဒီးပိဏမုႈလ႕တႈဆါလီၚဒီးဖုးအီၚလ႕အစု (awoman withaparalyzed arm) လဲၚ၀ဲဆူထံမူအံၚအအိဥယ ဆ႕မုဏလဏ၀ဲဒ္သိး အတႈဆါကဘ်ါက့ၚ၀ဲအဂီီႈနဥ့လီၚ’ လြံဥနံဥပူၚကြံဏ၀ံၚအလီႈခံ ပိဏမုဏလ႕အစုသံ၀ဲတခီအံၚ အတႈဂ့ႈတႈက်ိၚ ဘဥတႈအ႕ဥလီၚတူဥလိဏအီၚဒ္ အတႈဒိးဘဥတႈဎါဘ်ါကြံဏအီၚ မ့ႈတႈလ႕အမၚအသးအဆိကတ႕ႈတဘ်ီ လ႕တႈလီၚလိဏလီၚလးအပူၚ လ႕၀့ႈလူဒ႕ဥနဥ့လီၚ’ ပွၚအါဒံအါဂၚသ့ဥတဖဥ အိဥထီဥ၀ဲဒီးတႈသူးဟူးသး၀းယ ဒီးနီႈ Bernadette နဥဟူဘဥ၀ဲ တႈဘိးဘဥသ့ဥညါအီၚ လ႕အတႈထံဥ (Vision) အပူၚ လ႕အမ့ႈ” လဲၚဒီး တဲသ့ဥညါဘဥ သီခါသ့ဥတဖဥယ ဒ္သိးအကဟဲ၀ဲဒီးပွၚကမ်႕ဥဖိသ့ဥတဖဥ ဆူတႈလီႈအံၚအအိဥ လ႕တႈလဲၚဖးထီ (Procession)ယ ဒီးကဘဥတ့ဘွီထီဥ၀ဲ တႈဘါသရိဏတဖ်႕ဥ ဖဲတႈလီႈအံၚနဥ့လီၚ’
ပွၚအါဒံအါဂၚတနီၚ ကတိၚလီၚတံဥတႈဒီးစံး၀ဲလ႕နီႈ Bernadette ထံဥဘဥ၀ဲနီႈမၚရံယ ဘဥဆဥ နီႈ Bernadette အကစႈဒဥ၀ဲ တစံးဒ္၀ဲတႈနီႈတမံၚလ႕ ပိဏမုႈအံၚမ့ႈမတၚမတၚလဲဥနဥ့လီၚ’ ဒ္အဒုးသ့ဥညါ၀ဲသီခါလ႕အဘဥမူဘဥဒါဖဲတႈလီႈအံၚအပူၚ ခဲအံၚခဲအံၚ ဘဥဃးဒီး တႈထံဥလ႕အထံဥဘဥ၀ဲသ့ဥတဖဥအဃိ သီခါအံၚ မ႕၀ဲနီႈ Bernadette ဒ္သိးအကသံကြႈပိဏမုႈလ႕အလိဏဖ်ါထီဥအသးတဂၚအံၚ အမံၚမ့ႈ၀ဲမတၚလဲဥနဥ့လီၚ. ဘဥဆဥ ဖဲအသံကြႈအီၚအခါ ပိဏမုႈအံၚ နံၚကမွံ၀ဲဒီးအိဥဒဥ၀ဲဘွဥ့ကလဏနဥ့လီၚ. ဖဲခံႏြံအတီႈပူၚ ပိဏမုႈအံၚမ့ႈမတၚမတၚ ပွၚတသ့ဥညါဒ္၀ဲလီၚတံဥလီၚဆဲးဘဥနဥ့လီၚ.
ဖဲသ႕ႏြံပူၚကြံဏ၀ံၚအလီႈခံယ ဖဲနီႈမၚရံဘဥတႈဘိးဘဥသ့ဥညါအီၚ ဒ္သိးအကမ့ႈ၀ဲခရံဏအမိႈအမုႈနံၚ (Annunciation) အပူၚယ Bernadette လဲၚကဒီး၀ဲဆူ လ႕ႈကအိအိဥ၀ဲတႈလီႈတဘ်ီနဥ့လီၚ’ ဖဲအထံဥ၀ဲပိဏမုႈအံၚအခါယ ဃ့ကညးအီၚသပွႈပွႈ ဒ္သိးအကစံးအီၚလ႕ အမ့ႈမတၚမတၚလဲဥနဥ့လီၚ’ လ႕ခံပိဏမုႈအံၚဎၚထီဥအစုသ့ဥတဖဥ ဒီးကြႈလီၚအီၚ ဒီးစံး၀ဲယ” ဎဲဒဥအံၚဎမ့ႈပွၚလ႕အဘဥတႈဒ႕ထီဥအီၚ ပူၚဖ်ဲးဒီး တႈဒဲးဘးနဥ့လီၚ’ (I am the Immaculate Conception)’ ပွၚလ႕အထံဥဘဥတႈထံဥ ပိဏမုႈဖိသဥ Bernadetteယ မ့ႈပွၚလ႕အအဲဥထူအဲဥဎြၚယ ဘဥဆဥ တအိဥ၀ဲဒီးတႈကူဥဘဥကူဥသ့အဃိယ တသ့ဥညါ၀ဲလ႕ တႈကတိၚအံၚ အခီပညီမ့ႈ၀ဲဒ္လဲဥဒ္လဲဥဘဥနဥ့လီၚ’ ဒ္အနဥဟူဒီးသ့ဥညါဘဥ၀ဲအသိး ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲတႈဂ့ႈအံၚ ဆူသီခါလ႕အဘဥမူဘဥဒါဖဲတႈလီႈအံၚအအိဥယ ဒီးလ႕တႈလီၚကမ႕ကမဥလ႕အဂီႈအပူၚ သီခါအံၚ ပဏဖ်ါထီဥကဒီးတႈဂ့ႈဆူ သီခါကရ႕ခိဥအအိဥနဥ့လီၚ’
ဖဲ ၁၈၅၈ အနံဥအပူၚ နီႈ Bernadette ထံဥဘဥကဒီး၀ဲ မုႈကနီၚနီႈမၚရံ ခံဘ်ီနဥ့လီၚ’ ဒီးမ့ႈ၀ဲဖဲ ခရံဏဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚလ႕တႈသံ၀ံၚ မုႈသ႕နံၚတဘ်ီယ ဒီးဖဲမုႈကနီၚလ႕ကစ႕ႈကဥမဲဥလ္ (Our Lady of Mount Carmel) အမုႈနံၚတဘ်ီနဥ့လီၚ’ ဖဲ ၁၈၆၂ အနံဥယ သီခါကရ႕ခိဥဖဲတႈလီႈတႈက်ဲအံၚအပူၚ ဒုးဟူူထီဥသါလီၚ၀ဲလ႕ ပိဏမုႈလ႕အလိဏဖ်ါထီဥအသးသ့ဥတဖဥ လ႕တႈလီၚလိဏလီၚလးအပူၚ တႈမၚအသးအံၚ မ့ႈတႈလ႕အႀက႕း၀ဲဒီး တႈစူဥတႈနဏနဥ့လီၚ’
ပွၚစီဆွံနီႈ Bernadette ဟးထီဥ၀ဲလ႕၀့ႈလူဒ႕ဥဖဲ ၁၈၆၆ အနံဥယ ဒီးလဲၚႏုႈလီၚ၀ဲဆူ ပိဏမုႈလ႕အပဏစီဆွံအသး အကရ႕တခါ လ႕ကီႈ (ၿပင္သစ္) အပူၚယ ဒီးမ့ႈလ႕အတူဥဘဥတႈဆါ တဘ်ဳးနံဥအဃိ သံ၀ဲဖဲ ၁၈၇၉ အနံဥနဥ့လီၚ’ ဖဲအသံ၀ဲအကတီႈယ တႈဘါသရိဏဖးဒိဥ (Basilica) တဖ်႕ဥ ဘဥတႈတ့ဘွီထီဥအီၚ ဒီးဘဥတႈပဏစီဆွံအီၚ ဖဲနီႈမၚရံလိဏဖ်ါထီဥအသးတႈလီႈအံၚယ ဒီးမ့ႈ၀ဲလ႕သီခါ (Fr. Peyramale) တီခိဥရိဏမဲတႈအဖီလဏနဥ့လီၚ’